China osisi Christmas osisi Wellheads ụlọ ọrụ na-emepụta | Cepai
Christmaskpụrụ Keresimesi Kachasị mma na Wellheads dị na API 6A nke 21th kachasị ọhụrụ, ma jiri ihe ndị kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ ọrụ dị iche iche dịka ọkọlọtọ NACE MR0175.
Nkọwapụta Ngwaahịa: PSL1 ~ 4
Klas ihe: AA ~ HH
Ọrụ Achọrọ: PR1-PR2
Klas Okpomọkụ: LU
A na-eji Wellhead na osisi Krismas site na CEPAI mee ihe maka olulu mmiri na mmanụ ma ọ bụ mmepụta gas, ntinye mmiri na ịrụ ọrụ ala. wellhead na osisi Krismas arụnyere n'elu a nke ọma na-akara annular ohere n'etiti casing na tubing, nwere ike ịchịkwa wellhead mgbali na ịgbanwe ọma eruba ọnụego na iga mmanụ si ọma ka ọjà akara.
Anyị na-emepụta wellhead na Christmas osisi dị ka API 6A ụkpụrụ kpam kpam, nwekwara ike-ezute izute zuru ezu ihe onwunwe na klas, okpomọkụ nso na PSL & PR larịị chọrọ. Anyị nwere ọtụtụ ụdị mma dị mma maka nhọrọ OEM, dị ka isi mmiri dị mma, ESP wellhead system, isi mmiri dị mma, mmiri ọgwụ ịgba agba, oge isi ego na-azọpụta, isi abụọ tubing, isi ihe dị mma.
Ọkwa nkọwapụta ngwaahịa: PSL1 ~ 4 Ihe Klaasị: AA ~ HH Nchọpụta Ọrụ: PR1-PR2 Okpomọkụ Klaasị: LU
Aha Osisi Krismas & Wellheads
.Dị Ahụkarị Christmas Tree / Geothermal Wellheads / Multiple Wellheads wdg
Nrụgide 2000PSI ～ 20000PSI
Dayameta 1-13 / 16 "～ 7-1 / 16"
Na-arụ ọrụ Tokpomoku -46 ℃ ～ 121 ℃ (LU ọkwa)
Ihe Ọkwa AA 、 BB 、 CC 、 DD 、 EE 、 FF 、 HH
Nkọwapụta Ọkwa PSL1 ～ 4
Ọkwa arụmọrụ PR1 ～ 2
Imewe, imepụta, ule na ihe niile bụ nke API 6A na-agbaso
tumadi gụnyere tubing isi, valvụ ọnụ ụzọ, valvụ ịkpagbu, elu Flange, obe na na
Main Structure nke gbawara n'etiti ụdị, integrated ụdị na abụọ anwụrụ ụdị
Enwere ike ịchịkwa ya site na ọnụ ọgụgụ nke nchekwa valvụ na usoro njikwa
Ọrụ nchekwa ọkụ na mgbawa na-egosi ọrụ dị
Osisi Krismas dị mma ma nwee ntụkwasị obi. Ọrụ dị mfe ma dị mma
NKWUKWU NKWU ICLỌ
Emepụtara maka ngwa ebe akụnụba bụ isi ọkwọ ụgbọ ala. A na-enweta nke a na-enweghị imebi ogo ma ọ bụ nchekwa.
◆ A na-enweta ruru olulu mmiri psi 5,000 na nhachaa ruo 3 1/8 ".
Adabara ubé utoojoo na corrosive gburugburu.
◆ Na-eji Energy Systems 'eme ihe nke nnyonye anya elastomer na akàrà elastomer.
EGO S SRING INGMING KWES ADR.
Emepụtara maka ngwa ebe a maara ọnọdụ mmepụta ma ọ bụ nwee amụma. Echiche a gụnyere Energy Systems 'proprietary elastomer seals aghụghọ na anyị "steeti nka" Model 120/130 valves valves.
◆ E nwere ruo olulu mmiri 15,000 nke ọma na nhachaa ruo 4 1/16 ".
Itable Kwesịrị ekwesị maka gburugburu, gburugburu ebe obibi na mgbe ị na-emepụta ihe na gburugburu ebe obibi ma ọ bụ na nso ebe ndị mmadụ bi (AA ruo FF).
A-◆ Mmepụta gburugburu gụnyere mmanụ, gas, mbuli gas na ide mmiri niile na ọrụ ntụtụ mgbe corrosion nwere ike ịbụ nsogbu.
◆ Ọ dị ma ọ bụ na-enweghị njikwa njikwa akara. Otutu ọdụ ụgbọ mmiri dị ma ọ bụrụ na achọrọ.
Ejiri ka API 6A, Ihe Odide F, PR-2 gbakwunyere ule nyocha ọzọ dị ka CEPAI chọrọ.
Ọrụ zuru oke ọrụ zuru ezu
Mepụtara maka ihe ndị kasị sie ike mmepụta chọrọ. Gụnyere Energy Systems 'patented metal-to-metal seal technology and the entire non elastomeric Model 120/130 valve valve.
◆ E nwere ihe ruru 20,000 olulu mmiri na nhazue nha ruo 7 7/1/16.
◆ Kwesịrị ekwesị maka gburugburu mmiri, gburugburu corrosive na mgbe ị na-emepụta na mpaghara nwere mmetụta gburugburu ebe obibi ma ọ bụ na nso ebe ndị mmadụ bi (AA ruo HH).
Production gburugburu na-agụnye isi elu nsogbu na elu-okpomọkụ gas mmepụta.
A-Dabere na akụrụngwa ahụ, ogo ogo dị elu nwere ike ịdị elu dị ka 450 Celsius F.
◆ Ọ dị ma ọ bụ na-enweghị usoro njikwa njikwa na-aga n'ihu. Otutu ọdụ ụgbọ mmiri dị ma ọ bụrụ na achọrọ.
Til Utilizes Energy Systems 'patented metal-to-metal sealing technology.
◆ Edere ya na API 6A, Ihe Odide F, PR-2 gbakwunyere mgbatị 300 dị ka CEPAI chọrọ.
EGO zuru ezu
Mepụtara maka niile multiple tubing eriri completions. Enwere ike ịhazi ngọngọ mejupụtara ebe ọ kachasị mma maka saịtị nke Operator. Valves nwere ike ihu n'ihu ma ọ bụ ọzọ ebe eriri ogologo na-eche otu ụzọ ihu na obere eriri 180 Celsius.
◆ O ruru 10,000 psi olulu mmiri na mmezu nha ruo 4 4/1/16.
◆ Adabara ụtọ ma ọ bụ utoojoo, corrosive gburugburu.
Mmepụta gburugburu gụnyere mmanụ, gas, mbuli gas na ide mmiri niile na ọrụ ịgba ntụtụ.
◆ Energy Systems aghụghọ maka ntakịrị mkpokọta ogologo na ohere kachasị. Nke a sụgharịrị ịbụ ego echekwara yana ọnọdụ nchekwa dị nchebe maka ndị na-arụpụta ihe.
Til Na-eji Energy Systems 'nnweta nnyonye anya na akara elastomer na akara elastomer. Enwere ya na akara igwe-na-igwe ma ọ bụrụ na achọrọ.
Ọdụdọ SUBMERSIBLE mgbapụta Mmeri
Mepụtara maka ngwa ESP ma ọ bụ ESPCP. Energy Systems ahaziwo na nhọrọ ntinye iji mezuo ihe onye ọrụ chọrọ chọrọ n'echefughị ​​mkpa ọ dị ịchekwa sistemụ ego bara uru.
◆ E nwere ruo olulu mmiri psi 5,000 na nhachaa ruo 4 1/16 ".
◆ Ezubere maka klas 1 Division 1, ndị na-abụghị 1 Class 1 Division 1, ma ọ bụ nhọrọ eriri ọkpọkọ dị mfe.
◆ Penetrator nhọrọ e ezi uche na-enye mgbanwe na ala nke echichi.
◆ Adabara ụtọ ma ọ bụ utoojoo na corrosion gburugburu.
◆ Mmeputa gburugburu na-agụnye mmanụ na dakọtara na ogwu ogbugba arụmọrụ mgbe corrosion nwere ike ịbụ ihe iseokwu.
◆ Na-eji Energy Systems 'nnweta nnyonye anya na akara elastomer na akara elastomer.
NTP -TA-NK LR COM KWES /R / / FRAC Flow usoro
Ezubere maka ngwa mbuli aka maka nfuli Rod na Nfuli oghere (PCP). Iji ka mma jeere ahịa na-ebuli elu, Energy Systems agbakwunyela BOP Production (IPBOP) na pọtụfoliyo ngwaahịa anyị. IPBOP na - enye onye na - arụ ọrụ ohere ịbanye na olulu mmiri ahụ na - enweghị nsogbu site na ịdebe ya ma ọ bụ, ọ bụrụ na e kewaa mkpara ndị ahụ, na - enye mmadụ ohere ịmechi olulu mmiri ahụ.
◆ E nwere ruo olulu mmiri psi 2,000 na nhacha emecha elu tinyere 4 1/16 ".
A-environment Production gburugburu bụ mmanụ ma nwere ike na-emegharị ka adabara ma ọ bụrụ na nso ogwu ogbugba arụmọrụ ike a ọzọ corrosive gburugburu ebe obibi.
◆ Ọ bụ ezie na enwere ike ịnye ihe ndị nwere onwe ha, BOP (IPBOP) bụ Integral Production BOP (IPBOP) nwere ike ịgbakwunye isi ọkpọkọ, mmepụta BOP na tee tee, ma ọ bụ njikọ ọ bụla nke ndị a, n'otu mpaghara.
B Integrated BOP na-enye ego echekwara ma e jiri ya tụnyere ịzụrụ ihe ndị ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, ụzọ ndị na-ehi ụra na-ebelata nke ukwuu, n'ogologo, nke nwere ike ịbụ 50% na-erughị, dị nchebe maka ndị na-arụ ọrụ Mmepụta.
Ms Mkpanaka BOP nwere ikike imechi site na mkpara 0 ruo 11/2.
Oyi na-emejupụta tubing
Mepụtara iji nye ndị ọrụ ohere ịga n'ihu na-emepụta mmanụ sitere na olulu mmanụ na gas na-enweghị nnukwu mgbatị. Energy Systems enwetala ngwa dị iche iche nke tubing na-ekpuchi, gụnyere ojiji dị ka tubing mmepụta mbụ iji dochie ọkpọkọ ahụ ejikọtara ọnụ, ma jiri ya dị ka eriri ọsọ na mmezu ndị dị ugbu a, na-abanye n'ime olulu mmiri dị ugbu a, na-ebugharị wuru, na-ebuli gas, ESP na-arụkọ na ọnụọgụ abụọ. eriri.
◆ Na-abawanye nchekwa site na mbenata oge mkpọmkpọ ebe a na-egwu ala na-anọ na ọnọdụ ya.
◆ Na-elatalata ego tubular site na ibelata oghere na casing nha.
A-completion Mmecha ngwụcha ngwa ngwa karịa igwe nkwekọrịta na tubụ ejikọtara ọnụ.
Vent Na-egbochi mmebi etolite metụtara mmiri mmiri na-egbu.
◆ Ọ dị na eri API niile na-ewu ewu na njikọ njikọta ma ọ bụ njikọta nke abụọ.
◆ Nrụgide nrụgide dị ka nrụgide egosipụtara nke tubes.
Emepụtara iji kwado arụmọrụ na-agbaji nke ọma na usoro mmezi gas ugbu a. Na mgbakwunye, sistemụ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma maka ngwa ebe ọnụego mmepụta dị elu mebiri ngwa ngwa na eriri siphon ga-agbakwunye na ụbọchị ga - aga n'ihu iji mepụta nrụpụta. The nta tubing isi Flange-enye ohere maka echekwa nwa oge tubingless completions na maka omenala tubing completions. Typedị mmecha a na-ewepu mkpa nke ngwaọrụ iche iche na ndị na-echekwa osisi n'oge ọrụ na-agbawa nke ọma, na-echekwa oge na ego. Usoro a na-akwado tubụ ahụ ejikọtara ọnụ ma ọ bụ mejupụta tubing mejupụtara.
◆ E nwere ruo olulu mmiri 15,000.
Itable Kwesịrị ekwesị maka gburugburu, gburugburu corrosive na mgbe ị na-emepụta na gburugburu ebe ndị nwere nsogbu gburugburu ma ọ bụ na nso nso nke ọnụọgụgụ (AA na HH).
◆ Ewepu mkpa maka Wellhead Isolation ngwaọrụ na Osisi Savers mbenata mgbazinye ngwá ọrụ na-eri.
◆ Na-ebelata mgbazinye mgbazinye mgbazinye ego n'ihi obere nha.
◆ Na-enye ohere ka eriri siphon gafere XT, rute, ma buru ngwugwu. Enwere ike iwepụ XT buru ibu buru ibu ma dochie ya na osisi nwere akụ na ụba nke kwekọrọ nha tubing na nrụpụta nrụpụta nke na-asọ nke ọma.
Ọzọkwa dị maka ojiji na DTO Wellhead System na-enye mgbakwunye mkpọpu ala oge na mmecha ego.
Mepụtara iji mee ka etinye aka nke ọma na-ewepụghị XT na flowline. Nke a na-enye onye ọrụ ahụ ohere ijigide njikọta mmiri, yabụ, na-ebelata ọnụahịa metụtara ijikọ olulu mmiri ahụ ma mee ka olulu mmiri ahụ laghachi ngwa ngwa.
◆ E nwere ruo olulu mmiri psi 10,000 na nhachaa ruo 9 ".
◆ Mmepụta gburugburu gụnyere mmanụ, gas na wiwi.
Na-eme ka ụzọ dị mfe nke eriri tubing maka mgbatị dị mfe.
◆ Na-enye ohere dị mfe maka Production Operator na ọnụ ụzọ ámá valves.
Na mmechi buru ibu, nwere ike belata oke dị mkpa maka oche isi.
Til Utilizes Energy usoro 'proprietary nnyonye anya elastomer akàrà na elastomer akara onyinye na anyị patented metal-to-metal akara technology.
AKW BKWỌ - ỌZỌ KWES .R.
Emepụtara maka ogo dị elu na ọnụọgụ na ngwa ebe oke mbuze n'ihi ọnụọgụ ndị ahụ nwere ike ịbụ nsogbu. Echiche a jiri Energy Systems 'teknụzụ kachasị ọhụrụ na ọla na elastomer akara na valvụ ọnụ ụzọ 120/130.
◆ E nwere ruo olulu mmiri 15,000 psi ma mezue nha ruo na 7 1/16 ".
A-Dabere na akụrụngwa ahụ, ogo ogo dị elu nwere ike ịdị elu dị ka 450oF.
◆ Utilizes Energy Systems 'patented metal-to metal sealing technology.
A kwadoro ya API 6A, Ihe Odide F, PR-2 gbakwunyere mgbatị 300 ọzọ dị ka CEPAI chọrọ
UBB TR CON KWES ER E ESP
Emepụtara iji kwe ka mgbapụta ahụ na-eme ka mmiri weghachite site na ntinye aka nke ọma yana yana eriri akpa. A na-emepụta olulu mmiri ahụ site na annulus; ya mere, usoro mmiri ahụ na-anọgidesi ike n'oge ọ bụla. A ghọtara ọghọm nke ESPs bụ pụta ụwa mmezi nke chọrọ na ihe ọ bụla downhole mgbapụta. Nke a chepụta echiche na-enye ohere mmezi ime na a obere akụkụ nke oge na ot ESP ẹkụre ụzọ.
◆ Ikike imeghari olulu mmiri ndị dị na olulu mmiri ọhụrụ.
Connection Na-aga n'ihu njikọ njikọta na BOP aka.
Ọrụ zuru oke nke ọma n'okpuru ọnọdụ "ibi ndụ nke ọma".
Mwepu nke eriri eletriki na eriri igwe.
Wor Ndozi ọsọ ọsọ na njikọta njikọta.
TLP / SPAR mezuru
Mepụtara iji nye osisi akọrọ ohere ka a na subbo wellbore si a erughị ala ụkwụ n'elu ikpo okwu (TLP) na SPAR.
◆ Single na sọrọ casing riser riser imewe ụkpụrụ nile n'elu erughị ala riser ngwa.
◆ O ruru 15,000 psi wellhead na nhachaa nha ruo 7 1/16 ".
Ogologo na-eguzogide ogologo ndozi hanga na riser nkwonkwo maka ezi na ngwa ngwa riser kwụsịrị.
◆ Riser ibu mmesho ikike na-enye ohere mfe echichi na mmezi.
Kọmpat aghụghọ na-ebelata ibu na ịdị elu maka uko ọma spacing na riser arọ mgbochi nke deepwater akọrọ ẹkụre nkeji.
◆ Jiri nkuku nrụgide dị n'etiti (6,650 psi) maka nchekwa ibu.
Otutu ọdụ ụgbọ mmiri na usoro nchịkwa na-aga n'ihu.
◆ Utilizes Energy Systems 'patented metal-to metal seal technology.
Nhazi nke nyiwe uzo na-enye ohere maka ndị ọrụ nchekwa dị nchebe na ọnọdụ ohere.
Nke gara aga: UFU ISI
Osote: Metal Abụọ-Ibe sere n'elu Ball valvụ
Osisi Krismas Na Wellhead
Wellhead Na Osisi Ekeresimesi
Isi na Wellness Christmas
Wellhead na ekeresimesi osisi mmezi
Nzukọ Wellhead Na Osisi Krismas
Rewghasa Type Apịtị valvụ maka API6A Standard
Akwụkwọ Mkpụrụ Akwụkwọ Ntuziaka maka 6kpụrụ API6A